DAAWO VIDEO”Canab Ismaacil Dhabdhable Oo Tageertay Shirka Iisimada Kana Hortimi Siyaasada Cali Khaliif.. | Marqaan News Agency
DAAWO VIDEO”Canab Ismaacil Dhabdhable Oo Tageertay Shirka Iisimada Kana Hortimi Siyaasada Cali Khaliif..
Published on July 17, 2017 by mar · 4 Comments
Qurbajoogta Kasoo jeeda Deegaanada Sool,sanag Iyo cayn Ayaa Tageero u Muujiyey Shirka Isimada Iyo Qodobada Laga Soo saaray Shirka Muqdisho ku yeesheen Xildhibaanada Barlamaanka Soomaaliya Uga Matalaya Deegaanka Iyo iisimada Deegaanka.
Canab Sulub Dhabdhable Oo Ka Mid Ah Qurbo Joogta Deegaanka Ee ku sugan London Iyo bad baado khaatumo Ayaa Sheegtay Inay tageer san tahay Shirka Iisimada Magaalada Buuhoodle Ka Iclaamiyaan Ayna ka horjeedo wada Hadalada Soomaliland uu kula Jiro Dr cali khaliif.
Anigu waxaan ahay dadka xiiseeya oo akhrista qoraalladaada waayo qof aqoon leh ayaad u muuqataa ama tahayba lkn hal talo aan ku siiyo (iska yaree soona gaabi qoraalladaada)haddii kale waxay noqonayaan qaar lagu daalo dabadeedna la iska daayo in la akhristo.
Ciddii caqli iyo garaad lihi waa ay dhaahsan tahay in aanan anigu qabiil mise beel liddi ku ahayn ee aan ku jihaado oo keli ah qawsaarada iyo budhcadda siyaasadeed iyo maamullada ay xaaraantooda ku xalaashadaan. Abidkay qabiil ama beel caay iyo af xumo toona uma geysto oo wax iga suurooba ma aha asalka ba. Laakiin qaddiyad qabiili ah ee lagu wato in ummaddeenan lagu kala dilo oo qarannimadeeda god dheer looga rido jihaad kulul baa inaga dhexeeya ilaa qiyaamaha. Qaddiyaddaydu waa Soomaaliweyn oo maalin calan keli ah hooskiisa is ku dugsata Eebbe idamkii, waxaanan aaminsanahay in waxii kale oo dhammi ay yihiin qaddiyado been iyo khiyaano ku salaysan ee in lagu jihaado ay waajib nagu wada tahay. Waa halka aynu ku kala jaan duwannahay aniga iyo kuwa ila yaabban ee aanu sawirkaas guud u muuqanin.
Horta waxaan ahay nin aad u jacel arrimaha la xidhiidha nolosha aadmiga ee baababka siyaasadda iyo dhaqaalaha khuseeya. Khibrada nolosha ee cimrigayga yari uu igu simay ayaa igu abuuray hammi weyn ee aan ummaddayda Soomaaliyeed la jeclaado xayaatada sarreysa ee ay hanteen dadka ku nool dalalka adduunyada oogu nolol fiican. Waxaa ii muuqda oo aan aad uga xanuunsadaa nimcada uu Eebbaheen nagu galladay iyo sida aynu is kaga af qabannay oo uga faqrisan nahay. Waxaa ii cad xaqiiqada ay qeexeen khubarada siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida laga barto ee ah in nolol fiican iyo horumar tayo leh lagu hantiyo oo keli ah qarannimo iyo midnimo dhab ah.
* MAXAA HALGANKAYGU YAHAY *
Waxaa hubanti ah in ay dad badan oo webkan daalacda ay ii arkaan nin siyaasadda ku khafiifay mise ay qabyaaladi dilootay ama se geed uu hadhsado la’. In badan baa karaahiyo ii aragta oo magacayga ba dhibsata. In badan oo kale na isku dareen iyo aragtiyo aynu nahay oo aad ayay u xiiseeyaan arrimaha aan meelahan kaga faalloodo – waanan kaga mahad celinayaa qaddarinta ay ii hayaan ee aan anigu ba u hayo. Waa maxay se waxa Cismaan Cawad sidan u xiijiya ayay malaha is wayddiintu tahay.